နိုင်ငံရေးပါတီတွေကို အစဉ်အလာအရ ဖြိုခွဲဖျက်ဆီးနေတဲ့ စစ်အုပ်စု ရဲဘော်ဖိုးသံချောင်း ၂၄/ မတ် ၂၀၁၀ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီပါတီဟာ မကြုံစဖူးစမ်းသပ်မှုတရပ်ကို ဖြတ်သန်းနေရပါတယ်။ ဒါကို ကျန်တဲ့မိတ်ဖက်ပါတီတွေက သံယောဇဉ်ကြီးစွာနဲ့ စောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်။ တဖက်မှာလည်း တခြားပါတီအတွင်းရေးကို ဝင်မပြောသင့်တာမို့ နှုတ်ကိုတင်းတင်းစေ့ပြီး အကောင်းဆုံးအဖြေထွက်လာပါစေလို့ပဲ အောက်မေ့နေကြပါတယ်။ စိတ်ရင်းဖြောင့်မှန်တဲ့၊ နိုင်ငံရေးအရ ရိုးသားတဲ့၊ အမြော်အမြင်ရှိတဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီတွေ အင်အားစုတွေဟာ ဒီချုပ်ရဲ့ အနေအထားကို စာနာသဘောပေါက်ကြပါတယ်။ အလားတူပဲ ဒီအဖွဲ့ချုပ်ကို ဇလားထဲသွန်းလောင်းသလို ဆန္ဒမဲတွေပုံလောင်းခဲ့၊ အောခဲ့ကြတဲ့ ပြည်သူလူထုကလည်း စိုးရိမ်ကြီးစွာနဲ့ စောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်။ ဒီချုပ်အနေနဲ့ ဒီတကွေ့ကို ချောမွေ့စွာ ဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေလို့ပဲ အားလုံးက ဆန္ဒပြုနေကြတာပါ။ ဒါပေမယ့် ဆန္ဒဆိုတာဟာ လက်တွေ့မဖြစ်သေးတဲ့ဟာကို ခေါ်တာပါ။ လောလောဆယ် လက်တွေ့မှာ တွေ့မြင်နေရတာ တခုကတော့ နအဖဗိုလ်ချုပ်တွေဟာ တဝက်တပျက်အောင်မြင်ပွဲမျိုးကို လက်မခံနိုင်ဘူးဆိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။ တနည်းပြောရရင် စေ့စပ်တယ်၊ ပြေအေးတယ်ဆိုတဲ့အဖြေမျိုး၊ ရလဒ်မျိုး၊ ခုခေတ်မှာ အပြောများနေတဲ့ win-win နှစ်ဖက်နိုင်အဖြေမျိုးကို သူတို့က လက်မခံနိုင်ပါဘူး။ သူတို့ကချည်းနိုင်မှ၊ တဖက်ကို အလဲထိုးနိုင်တဲ့ အဖြေမျိုး၊ ရလဒ်မျိုးပဲ ရချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ဆွေးနွေးပွဲ လုပ်တယ်၊ စကားပြောကြတယ်ဆိုရင် ကြိုတင်စည်းကမ်းသတ်မှတ်တာ (pre-condition) ကို ဘယ်တော့မှလက်မခံပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒီနေရာမှာ ထောက်ပြစရာရှိတာက ဒီ ဗိုလ်ချုပ်တွေဟာ သူတို့အပေါ် ကြိုတင်စည်းကမ်းသတ်မှတ်တာကိုသာမကြိုက်တာ၊ သူများတွေအပေါ်တော့ အမြဲသတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့ နှောင်တုပ်ပြီးမှ ဆက်ဆံတာပါ။ သူတို့ဟာ တဖက်သားဆီက ဘယ်တော့မဆို အကြွင်းမဲ့လက်နက်ချတာ (unconditional surrender) ကိုပဲ လိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတခါ သူတို့ ထုတ်ပြန်လာတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေတွေကြည့်ရင် အဲဒီလို သဘောထားတွေကို မမြင်ချင်အဆုံး တွေ့ရပါမယ်။ စစ်အုပ်စု လိုလားတဲ့ စေ့စပ်မှုဆိုတာဟာ ၁၉၅၈ ခုနှစ် အာဏာသိမ်းပွဲတုန်းက ဦးနုဆီကို အာဏာသွားတောင်းတော့ ဦးနုက“စေ့စပ်” ပြီး အာဏာလွှဲပေးလိုက်တာမျိုး၊ တပ်နဲ့လက်နက်တွေအပ်ပြီး သံအမတ်ရာထူးလက်ခံတဲ့ စေ့စပ်မှုမျိုးသာဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ ၂ဝဝ၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို “ဖြည်းဖြည်းချင်း ပြုပြင်သွားဖို့” စေ့စပ်တာမျိုးကို မလုပ်ရေးချ မလုပ်ဆိုတာ သံသယ ဖြစ်စရာမရှိပါဘူး။ မြန်မာပြည်သမိုင်းမှာ စစ်အုပ်စုက ဖြိုခွဲလို့ပြိုကွဲခဲ့တဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီတွေ၊ အဖွဲ့အစည်းတွေများလှပါပြီ။ ဖဆပလအဖွဲ့ကြီးကွဲရာမှာ တပ်ထဲက ဗိုလ်ချုပ်တွေရဲ့ ခြေရာလက်ရာတွေမကင်းသလို တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေ (လက်နက်ကိုင်သူရော လက်နက်မကိုင်သူတွေအပါ)၊ လူထုလူတန်းစားအဖွဲ့အစည်းတွေ၊ သံဃာတော်တွေ၊ ရေးရရင် စာရင်းက ကုန်နိုင်ဖွယ်ရာ မရှိပါဘူး။ အထဲမှာ သူ့လူတွေ ထည့်ပြီးဖြိုခွဲတာ၊ အပြင်ကနေ ဖိအားပေး ခြိမ်းခြောက်ပြီးဖြိုခွဲတာ၊ နည်းမျိုးတွေစုံလို့ပါပဲ။ ဒီအထဲက အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကို ဖြိုခွဲဖို့လုပ်ခဲ့တာဆိုရင် စတင်တည်ထောင်ကတည်းက စခဲ့တယ်လို့တောင် ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဗိုလ်အောင်ကြီးလို ပထမမျိုးဆက် စစ်အုပ်စုဝင်ဟောင်းတွေကနေ ‘တတ်သိ’ တွေကို ဖယ်ရှားဖြိုခွဲတာလည်း ဖြတ်သန်းခဲ့ရ၊ အခုလို ဥပဒေနဲ့အကျပ်ကိုင် ဖြိုခွဲတာလည်း ကြုံရလို့ မှတ်တမ်းတင်ရပါတော့မယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီတခါ နအဖရဲ့ လုပ်ရပ်ကတော့ အားလုံးထဲမှာ အဆိုးဆုံးဖြစ်တယ်လို့ ပြောရပါမယ်။ ဒီတချီမှာတော့ သူတို့ဟာ မသိမသာ၊ လက်သည်မပေါ်အောင် သပ်လျှိုတာ၊ ဖြိုခွဲတာမဟုတ်တော့ဘဲ ပြောင် ကမ္ဘာသိ လုပ်တော့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကို နအဖစစ်အုပ်စုဟာ ဖြိုခွဲရေးစီမံကိန်းကနေ ဖျက်သိမ်းရေးစီမံကိန်းဆီ လှမ်းတက်တဲ့ ခြေလှမ်း လို့ ဆိုရပါတော့မယ်။ ဒီလိုတဖက်မှာ ဖိနှိပ်မှုတွေပြင်းလာ၊ တဖက်မှာတော့ အမတ်ဖြစ်မယ်၊ ဝန်ကြီးဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ မြှူဆွယ်မှုတွေများလာနေတဲ့ အခြေအနေအောက်မှာ ရွေးကောက်ပွဲနီးလာတာနဲ့အမျှ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးဇာတ်ခုံမှာ ခြံကူးတာ၊ ဘက်ပြောင်းတာတွေ၊ ပင်ကိုယ် အသွေးအရောင်ကို ဖော်ပြလာတာတွေ၊ အမျိုးမျိုး စတွေ့လာနေရပါပြီ။ ဒီအကွေ့မှာ ရှိပ်စပီးယားရဲ့ ဂျူးလိယက်စ်ဆီဇာ ပြဇာတ် ထဲကလို “ဘရူးတပ်စ်-မင်းလဲပါသကိုး” ဆိုတဲ့ မျှော်လင့်မထားတဲ့ သစ္စာဖောက်တွေကို တွေ့ရရင်လည်း အံ့သြစရာမရှိပါဘူး။ ဒါကြောင့် ဒီတပွဲမှာ သူ့စည်းကိုယ့်စည်းခွဲဖို့ဟာ အင်မတန်မှအရေးကြီးလှပါတယ်။ တချိန်တည်းမှာ ကိုယ့်အင်အားကို ကြီးသထက် ကြီးအောင်လုပ်၊ သူ့အင်အားကို သေးသထက်သေးအောင် လုပ်ရမယ့်အချိန် ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်း ဘယ်သူမှ ငြင်းမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကြားထားသင့်တဲ့လူကိုကြားထား၊ ဥပက္ခာပြုသင့်တဲ့ လူကိုဥပက္ခာပြု လုပ်ရပါမယ်။ အားလုံးကို နအဖဘက်ချည်း တွန်းပို့ပေးတာ မလုပ်သင့်ဘူး ထင်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ သူနဲ့ကိုယ်လို့ပြောတာဟာ နအဖနဲ့ပြည်သူကိုပြောတာဖြစ်ကြောင်း ထပ်ပြောလိုပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ နအဖရဲ့ ဘေးမှာရပ်တည်တဲ့ အင်အားအရေအတွက် နည်းသထက်နည်းအောင် ကြံဆရပါမယ်။ ဒါဖြင့် ဘယ်လိုလူကို နအဖနဲ့ တသားတည်း ရပ်သူဆိုတာ ဘာစံနဲ့ တိုင်းမလဲဆိုတာကို စဉ်းစားရပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲဝင်သူ ဒို့ရန်သူ၊ ရွေးကောက်ပွဲမှာ မဲပေးသူ ဒို့ရန်သူလို့ သတ်မှတ်လိုက်ရင် ရန်သူအဝန်းအဝိုင်းဟာ သိပ်ကျယ်သွားနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်နဲ့အလုံးစုံတူညီတဲ့လူမှ ကိုယ့်လူ၊ ကိုယ့်မဟာမိတ်လို့ သဘောထားလို့မဖြစ်ပါဘူး။ တချို့ကိုနားလည်ယူတာ၊ ခွင့်လွှတ်တာ၊ ကြားသဘောထားတာတွေ လုပ်ရမှာပါ။ ဒါကြောင့်မို့ ဒီတပွဲမှာ အဓိကထားရမယ့် စံ၊ ဒါမှမဟုတ် စည်းဟာ နအဖရဲ့ ၂ဝဝ၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေအပေါ်မှာ ဘယ်လိုသဘောထားသလဲဆိုတာ ဖြစ်သင့်ပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရေး မဝင်ရေး ပြောရာမှာ အဲဒီဖွဲ့စည်းပုံအကြောင်းကို ထည့်မပြောလို့ မဖြစ်ပါဘူး။ ဒီဖွဲ့စည်းပုံအောက်မှာတည်ရှိနေတဲ့ လွှတ်တော်တရပ်ဟာ ရုပ်သေးလွှတ်တော်ထက်တောင်ဆိုးတဲ့ ညောင်နှစ်ပင်ညီလာခံသာသာ လွှတ်တော်ဖြစ်မှာပါ။ မြန်မာပြည်နိုင်ငံရေးကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရာမှာ အနှစ် (၂ဝ) ကျော် တရားမရှိ၊ ဓားမရှိ အုပ်စိုးခဲ့တဲ့ နဝတ-နအဖစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေဟာ စစ်အာဏာရှင်အစိုးရတွေဖြစ်တယ် ဆိုတာလောက်ကိုတောင်မှ အသိအမှတ်မပြုတဲ့လူတွေဟာ အဲဒီဖွဲ့စည်းပုံကို စုံလုံးမှိတ် လက်ခံကြရုံမက ရှေ့နေလိုက်၊ အကာအကွယ်တောင် ပေးနေကြပါတယ်။ ဒီလိုအချိန်မှာ မြန်မာပြည်သူတွေကို ရွေးကောက်ပွဲညီမျှခြင်း ဒီမိုကရေစီ၊ စစ်အာဏာရှင်တွေကို အထိန်းအကွပ်မရှိ အုပ်စိုးခိုင်းထားတာထက်၊ လွှတ်တော်တရပ် ရှိနိုင်ရင် တစုံတရာထိန်းကွပ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ စကားမျိုးပြောနေသူဟာ သူကိုယ်တိုင် ဘာမှနားမလည်လို့၊ ဒါမှမဟုတ် သိလျက်နဲ့ ညာနေတာသာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုရှုပ်ထွေးပွေလီနေတဲ့အချိန်မှာ တွေ့နေရတဲ့ လုပ်ရပ်တခုက ကိုယ့်အချင်းချင်းရဲ့ အက်ကြောင်းတွေကိုလိုက်စမ်းတာ၊ ရှာတာ၊ တွေ့ရင်နှဲ့တာတွေ ဖြစ်နေပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ကြားလူ၊ သမာသမတ်ရှိသူ၊ ဘက်မလိုက်သူ ဆိုတာမျိုးပြောပြီး ဒီချုပ်အပါ ပြည်သူလူထုအင်အားတွေကို သွေးတိုးစမ်းနေ၊ နှဲ့နေတာတွေလည်း တွေ့နေရပါတယ်။ ဒါဟာဘယ်သူ့အကြိုက်ဖြစ်စေလို့၊ ဘယ်သူ့ကို အကျိုးပြုတယ်ဆိုတာ ရှင်းနေတာပါ။ ဒါပေမယ့် မြန်မာပြည် ပြည်သူလူထုအပေါ်မှာ မယုံတဲ့၊ အနာဂတ်ကိုမယုံတဲ့၊ စစ်အုပ်စုရဲ့ အင်အားကို အထင်ကြီးလာတဲ့ တချို့လူတွေဟာ အခုအခါမှာ ကြားနေတယ်ဆိုတဲ့အချိုးမျိုး ချိုးလာနေကြတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဒါတောင် နအဖရဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဟာ လုပ်မပြီးသေးပါဘူး။ လုပ်များပြီးသွားလို့ နအဖအစိုးရက သူတို့ကိုယ်သူတို့ “ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေနဲ့အညီ အုပ်စိုးနေတဲ့အစိုးရ” လို့ ကြေညာလာရင် အဲဒီ “ကြားနေ” ပုဂ္ဂိုလ်များ ဘယ်လိုပြောကြဦးမလဲ မသိပါဘူး။ မမေ့ကြသင့်တဲ့ အချက်တချက်က ဒီနေ့လိုအခြေအနေမှာ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကို နအဖက မတော်မတရား ဖျက်ဆီးနေတာကို ဘယ်လိုသဘောထားသလဲ၊ ဘယ်လိုတုံ့ပြန်သလဲ ဆိုတာဟာ ဒီချုပ်အဖွဲ့ဝင်မဟုတ်တဲ့ တခြားနိုင်ငံရေးသမားများနဲ့ နိုင်ငံရေး အင်အားစုတွေကိုလည်း မှတ်ကျောက်တင်လိမ့်မယ် ဆိုတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ အခက်အခဲတွေက ကြီးပါတယ်။ ပြည်သူလူထုမှတပါး တခြားဘယ်သူမှ သူတို့ကို မကယ်နိုင် ပါဘူး။ သူတို့သမိုင်းမှာ အောင်မြင်မှုအရဆုံးဆိုတာဟာ ၁၉၉ဝ ပြည့်နှစ် ရွေးကောက်ပွဲတုန်းကဖြစ်ပြီး အဲဒါဟာ ပြည်သူလူထုရဲ့ ဝိုင်းဝန်းထောက်ခံမှုကြောင့် ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ http://www.khitpyaing.org/articles/2010/March/24310.php
http://ifile.it/owr1lmiFBF to NLD (24.3.2010) Summary only...
http://ifile.it/832v7a4SCM Stmt Bur Summary only...
ဘီဘီစီ ၂၃၊ ၃၊ ၂၀၁၀ ညပိုင်း မြန်မာဘာသာအစီအစဉ်မှ အသံလွှင့်ချက် ကဏ္ဍတခုကို စာဖြင့်ပြန်လည်းရေးသားပြီး မိတ်ဆွေများအတွက် ဝေမျှလိုက်ပါသည်။ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- သောတရှင်များရှင် စောစောက အသိပေးထားတဲ့သတင်းကို ဦးစွာတင်ပြပေးပါဦးမယ်။ ဒီကနေ့မှာ အန်အယ်ဒီ ထိပ်တန်းရှေ့နေကြီးနှစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဦးဥာဏ်ဝင်းနဲ့ဦးကြည်ဝင်းဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုနေအိမ်မှာ သွားရောက်တွေ့ဆုံကြပါတယ်။ ဒီအခါမှာ လာမည့်ရွေးကောက်ပွဲအတွက် အန်အယ်ဒီပါတီ မှတ်ပုံတင်ရေး - မတင်ရေး ကိစ္စပေါ်မှာ အခြေခံပြီးတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့သဘောထားကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိရအောင် မေးကြည့်တဲ့အခါမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ပြောစကားကို ဦးဥာဏ်ဝင်းက အခုလို ရှင်းပြပါတယ်။ ဦးဥာဏ်ဝင်း။ ။ ဒေါ်စု ပြောတာက .. “ဒီလိုတရားမျှတမှုမရှိတဲ့ ဥပဒေ၊ တဖက်သတ်ရေးထားတဲ့ ဥပဒေတွေအရ မှတ်ပုံတင်ရမယ့်အလုပ်ကို သူဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူး၊ မှတ်ပုံလည်းတင်ဖို့ ဆန္ဒမရှိဘူး၊” .. ဒီလိုပြောပါတယ်။ တဆက်တည်းပြောတာက .. “အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့ ဒီမိုကရေစီနည်းလမ်းနဲ့အညီ ဆုံးဖြတ် ဆောင်ရွက်သွားဖို့ လိုတယ်” လို့ ပြောပါတယ်။ ဒေါ်နီတာရင်ရင်မေ။ ။ ဒါဆိုလို့ရှိရင် ဒီ မတ်လ ၂၉ ရက်နေ့မှာ ဒီမဲခွဲ ဆုံးဖြတ်ကြမယ်ဆိုတော့ .. ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့ ပါတီကနေ ထွက်သွားမယ် - မထွက်သွားဘူးဆိုတဲ့ အချက်ကိုရော ဘယ်လိုများပြောနိုင်မလဲရှင့်။ ဦးဥာဏ်ဝင်း။ ။ အခုပြဿနာမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပါတီက ထွက်သွားမယ် - မထွက်သွားဘူးဆိုတဲ့ issue ကလည်း မပေါ် သေးပါဘူးဗျာ။ ကျနော်တော့ လုံးဝ စိုးစဉ်းမျှ မကြားပါဘူး။ ဒေါ်နီတာရင်ရင်မေ။ ။ ဟုတ်ကဲ့ရှင့် .. ဒါဆိုလို့ရှိရင် ဒီ မဲမခွဲချင်တဲ့ အသံတွေလည်းတချို့ အဖွဲ့ဝင်တွေဆီက ကြားနေရပါတယ်။ အဲတော့ တချို့ ကလည်း မဲခွဲလို့ရှိရင်လည်း ဒီ လျှိူ့ ဝှက်မဲပေးမယ့် ကိစ္စတို့ပေါ့နော် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း မဲပေးမယ့်ကိစ္စတို့လည်း ရှိနေပါတယ်ရှင့်။ အဲတော့ ၂၉ ရက်နေ့မှာရော ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ ဖြစ်သွားနိုင်မလဲရှင့်။ ဦးဥာဏ်ဝင်း။ ။ အဲဒါတော့ ကျနော်လည်း မသိဘူးဗျ။ မဲခွဲရေး - မခွဲရေးဆိုတာ ဒီမိုကရေစီမှာ မဲခွဲတာ ထုံးစံပဲလေ။ အဲတော့ ထုံးစံကိုလက်မခံဘူးဆိုရင် ဒီမိုကရေစီကို လက်မခံဘူးသဘောဖြစ်မှာပေါ့။ ဒေါ်နီတာရင်ရင်မေ။ ။ ဟို .. ဆရာတို့အနေနဲ့ပေါ့နော် .. ဒီ .. ထောင်ထဲက ဒီ ဗဟိုကော်မတီဝင်တွေရဲ့သဘောထားကိုရော ရယူဖို့ ရှိပါသေးလားရှင်။ ဦးဥာဏ်ဝင်း။ ။ လက်တွေ့အခြေအနေအရ မဖြစ်နိုင်ပါဘူးခင်ဗျာ။ ဒေါ်နီတာရင်ရင်မေ။ ။ နောက်ပြီးတော့ .. ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေထဲမှာ မှတ်ပုံမတင်လို့ရှိရင် ပါတီအဖျက်သိမ်းခံရမယ် ဆိုတဲ့ အချက်က ပါတယ်ရှင့်၊ ဒီအချက်နဲ့ပတ်သက်လို့ရော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဆရာဦးဥာဏ်ဝင်းတို့ကို ဘာများပြောလိုက်ပါသေးလဲ။ ဦးဥာဏ်ဝင်း။ ။ သီးခြားပြောတာမရှိဘူး၊ ဒီလို မှတ်ပုံ မတင်ရင် ပျက်တယ် ဘာညာဆိုတာ ကျနော်တို့ “ဖျက်တာနဲ့ ပျက်စီးတာ မတူဘူးတဲ့။ NLD မပျက်စီးဖို့လိုတယ်” တဲ့။ အဲလိုမျိုးပြောပါတယ်။ ဒေါ်နီတာရင်ရင်မေ။ ။ အဲတော့ NLD မပျက်စီးဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့ ဒီ message ကိုပေါ့နော် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ message ကို ဆရာဦးဥာဏ်ဝင်းတို့အနေနဲ့ ဘယ်လို .. ဘာသာပြန်နိုင်မလဲရှင့်။ ဦးဥာဏ်ဝင်း။ ။ ဟုတ်ကဲ့ .. ကျနော်တို့ပါတီ .. အဲဒီ ဥပဒေတွေကြောင့်ပျက်သွားလို့ရှိရင် အဲဒါ ပျက်စီးတာမဟုတ်ဘူး၊ ဖျက်ဆီးခံရတာ။ ပျက်စီးတယ်ဆိုတာ NLD ရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာကျဆင်းပြီး ပျက်စီးတာကိုပြောတာ။ ဒေါ်နီတာရင်ရင်မေ။ ။ ဟုတ်ကဲ့ ဒါဆိုလို့ရှိရင် မှတ်ပုံမတင်ပဲနဲ့ပါတီရပ်တည်နိုင်မယ့်နည်းလမ်းရော စဉ်းစားထားပါသေးလား ရှင်။ ဦးဥာဏ်ဝင်း။ ။ ကျနော်တို့ပါတီရပ်တည်နိုင်မှုအတွက် မစဉ်းစားဘူး။ နိုင်ငံရေးစဉ်းစားတယ်။ နိုင်ငံရေးဆိုတာ ပါတီရှိမှမဟုတ်ဘူး၊ နိုင်ငံရေးကိုပါတီမရှိလည်း လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ အခြေခံကို ကျနော်တို့နားလည်ပါတယ်။ ဒါကတော့ ဦးဥာဏ်ဝင်းက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့သဘောထားအမြင်တွေကို ဘီဘီစီကို ရှင်းပြသွားတာ ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ တခါ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဘက်ကနေ အခုလို NLD ပါတီ မှတ်ပုံတင်ရေးပေါ်မှာ သူ့ရဲ့သဘောထားအမြင်ကို ဦးဥာဏ်ဝင်းကတဆင့်ပြောပြလိုက်ပြီ... ဆိုတော့ ဒီ .. ပါတီမှတ်ပုံတင်ရေးကို လိုလားသူတဦး ဖြစ်တဲ့ NLD ရွေးချယ်ခံ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာသန်းငြိမ်း ကိုလည်း ဆက်သွယ်လိုက်ပါတယ်။ ဒေါ်နီတာရင်ရင်မေ။ ။ ဒေါက်တာသန်းငြိမ်းတို့အနေနဲ့ ဒီ .. မှတ်ပုံတင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရဲ့ သဘောထားကို သိအပြီးမှာ ဘယ်လိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်ကြမှာပါလဲလို့ မေးကြည့်ပါတယ်ရှင်။ ဒေါက်တာသန်းငြိမ်း။ ။ ကျနော့်အမြင်ကတော့ ဒီလိုဗျ။ အများဆန္ဒနဲ့ဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုတာက ဒီအဖွဲ့အစည်းတခုရဲ့ မူဝါဒတွေ .. ဘယ်လမ်းလိုက်မလဲ .. ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့။ အဲဒီလို မူဝါဒရွေးချယ်တဲ့နေရမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ အများဆန္ဒနဲ့ရွေးချယ်တဲ့လမ်းကိုလိုက်တယ်ဆိုတာ ဒါကတော့ မှန်ကန်ပါတယ် သဘာဝကျပါတယ်၊ သို့သော်လည်းပဲ ဒီနိုင်ငံရေး အဖွဲ့အစည်းတခု ဆက်ပြီးတော့ပေါ့နော် ကျနော်တို့ ရပ်တည်မယ် -မရပ်တည်ဘူးဆိုတာက ဒီအဖွဲ့အစည်းတခုအနေနဲ့ နိုင်ငံရေးဆက်လုပ်မယ် မလုပ်ချင်ဘူးဆိုတဲ့ ဆန္ဒနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ ကျနော့်အမြင်ကတော့ ဒါက .. ကျနော်တို့ .. ဒီ .. အခြေခံလူ့အခွင့်အရေးနဲ့ပတ်သက်တယ်လို့ထင်တယ်လေ။ ဆိုတာက .. ဟို .. သူလုပ်ချင်တာနဲ့ မလုပ်ချင်တဲ့လူကို အတင်း လုပ်ရမယ်လို့ ပြောလို့မရသလို၊ ကိုယ်မလုပ်ချင်တာနဲ့ပဲ ကျန်တဲ့ လူတွေလည်း မလုပ်ရဘူးလို့ ဒီလို ကန့်သတ်လို့မရဘူးလို့ ကျနော်တော့ အဲလို ထင်တာပဲလေ။ ဒေါ်နီတာရင်ရင်မေ။ ။ ဟုတ်ကဲ့ အဲတော့ .. ဆရာ့အနေနဲ့ ဒီမဲနဲ့ဆုံးဖြတ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချင်ပါသလဲရှင့်။ ဒေါက်တာသန်းငြိမ်း။ ။ ဒါက သူက တဦးချင်းရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့် လို့ ကျနော်က မြင်တယ်ဗျ။ ဒီ နိုင်ငံရေးဆိုတာ သူတို့အသင်းအဖွဲ့အနေနဲ့စုပေါင်းပြီးတော့ လုပ်ချင်ရင်ပဲလည်း အဲဒီလုပ်ချင်တဲ့သူတွေရဲ့ ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေးပဲဗျ။ မလုပ်ချင်ဘူးဆိုရင်လည်းပဲ မလုပ်ချင်တဲ့သူတွေရဲ့ ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေးပဲ။ အဲဒီတော့ .. ဒါကတော့ .. ကျနော်ထင်တယ် ဒီမိုကရေစီနည်းနဲ့ များရာ ဆုံးဖြတ်တာမျိုးထက်ပေါ့ဗျာ ဒါက မိမိရဲ့ဆန္ဒပေါ့။ ဒေါ်နီတာရင်ရင်မေ။ ။ တဦးချင်းရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဆိုတာကတော့ ဟုတ်ပါတယ် ဆရာ၊ ဒါပေမယ့် NLD ဟာ အများပိုင်တဲ့ ပါတီကြီးတခုဖြစ်တယ်လေ။ NLD ဆိုင်းဘုတ်အောက်မှာ မှတ်ပုံတင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရော အများနဲ့ မဆိုင်နိုင်ဘူးလားရှင့်။ ဒေါက်တာသန်းငြိမ်း။ ။ ဒီမှာ မနေချင်တဲ့သူနဲ့တော့ မဆိုင်ဘူးပေါ့ဗျာ။ ဒီမှာ ကျန်နေတယ်ဆိုတဲ့ လူတွေကလည်းပဲ သူက .. ဟို .. တစိမ်းတွေမှမဟုတ်ပဲ၊ အပြင်ကနေလာပြီးတော့ ဒီနာမည်ကိုလာယူတာမှ မဟုတ်ပဲ။ အစထဲက နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော် ဒီထဲမှာ ၀င်ပြီးတော့ လုပ်နေတဲ့လူတွေပဲ၊ အဲတော့ သူတို့က .. ဒီ.. အဖွဲ့ရဲ့ ဆိုင်းဘုတ်၊ ဒီအဖွဲ့ရဲ့နာမည် ဒါနဲ့ သူတို့နဲ့ သက်ဆိုင်တာပေါ့ဗျ။ အဲတော့ ဒီထဲမှာ မနေချင်တဲ့လူက သူ့ဟာသူ မလုပ်ချင်လို့ထွက်သွားတာကို ကျနော်တို့က အတင်း မတားသလို၊ သူတို့ထွက်တာနဲ့ပဲ ဒီထဲက လူတွေက ..ဟလား .. ဆက်မလုပ်ရဘူးဆိုတာက .. ဒါကတော့ ခုနကျနော်ပြောတဲ့ တဦးချင်းရဲ့ ရပိုင်ခွင့် အခွင့်အရေးကို ဒါ နည်းနည်းကျော်နင်းတယ်လို့ ကျနော်တော့ မြင်တာပဲလေ။ ဒေါ်နီတာရင်ရင်မေ။ ။ ဒါဆိုလို့ရှိရင် .. ဒီ မှတ်ပုံ မတင်ချင်တဲ့ဘက်က ရပ်တည်တဲ့လူတွေက NLD အဖွဲ့ထဲကနေ ထွက်ပေးရမှာလားရှင့်။ ဒေါက်တာသန်းငြိမ်း။ ။ ဒါက မဟုတ်ဘူးလေ .. သူတို့နေချင်ရင်လည်း .. နေပေါ့ ..။ ကျနော်တို့က (အနည်းငယ် လှောင် ရယ်သံလေးဖြင့်) မပြောပါဘူး။ မှုတ်ဖူးလား .. သူတို့ထွက်ချင်လည်းထွက်ပေါ့ .. ဒါ သူတို့ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ပဲလေ။ ဒေါ်နီတာရင်ရင်မေ။ ။ ဟုတ်ကဲ့ရှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဘက်ကတော့ ဒီ မတရားတဲ့ဥပဒေအောက်မှာသတ်မှတ်ထားတဲ့စည်းကမ်းချက်တွေကြောင့် မှတ်ပုံမတင်ရေးဘက်ကို သူ့ဘက်ကတော့ ရှင်းရှင်းပြောသွားပြီ၊ အဲဒီတော့ ဆရာတို့အနေနဲ့ ဒီမှတ်ပုံတင်ဖို့ ကိစ္စကို ဆက်ပြီးတော့ သွားမှာလားရှင့်။ ဒေါက်တာသန်းငြိမ်း။ ။ အဲ .. ဒါကတော့ ကျနော်တယောက်တည်းပြောလို့မရဘူးလေဗျာ၊ အဲ ကျန်တဲ့လူတွေနဲ့ကျနော်တို့လည်း တိုင်ပင်ဆွေးနွေးရဦးမှာပေါ့။ ဒေါ်နီတာရင်ရင်မေ။ ။ ဒါဆိုလို့ရှိရင် ပါတီဟာ ပြိုကွဲသွားတဲ့အနေအထား ရောက်မသွားနိုင်ဘူးလားရှင့်။ အများက ဒါကိုပဲ စိုးရိမ်နေကြတာလေ။ ဒေါက်တာသန်းငြိမ်း။ ။ ပါတီမပြိုကွဲစေချင်လို့ ဒီ ပါတီကြီးကို .. ဟလား .. ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ဆက်ပြီးတော့ ကျနော်တို့က .. ဟလား .. နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော်ဗျာ အမျိုးမျိုး ကျနော်တို့ .. ဒီ .. စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံခဲ့ကြတဲ့ ဒီပါတီကြီးကို ဆက်ပြီးတော့ ရှိစေချင်လို့ ကျနော်တို့က ဒါကို ကျိုးစားနေတာပဲ။ နော် .. မတရားဘူးဆိုတာ ခုမှ မဟုတ်ပဲဗျာ .. စတည်းက မတရားခဲ့တာကို ကျနော်တို့ ရင်ဆိုင်ခဲ့တာပဲ။ အဲတော့ ဒီ မတရားမှုတွေကို ကျနော်တို့ ဆက်ပြီးတော့ .. ဟလား .. ရင်ဆိုင်သွားဖို့အတွက် ဒီအဖွဲ့အစည်းဟာ .. ဟလား .. ရှိအပ်တယ် .. အင်းအင်း .. လိုအပ်တယ်လို့ ကျနော်တို့ယုံကြည်လို့ ကျိုးစားခဲ့တာပဲ။ နော် .. ဒီပေါ်မှာ ဟာ .. သူမကြေနပ်လို့သွားတဲ့ဟာကို လည်းပဲ သူ့ရဲ့အခွင့်အရေးတရပ်အနေနဲ့ ကျနော်တို့က ဘယ်လိုမှ တားဆီးလို့မရဘူးလေ။ အဲဒါကို ကွဲတယ်ပဲ ပြောပြော ပဲ့တယ်ပဲပြောပြော ဒါကတော့ ကျနော်တို့ ရင်ဆိုင်ရမှာပေါ့။ ဒါကတော့ NLD ရွေးချယ်ခံ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာသန်းငြိမ်းက ရှင်းပြသွားတာ ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အီးမေးလ်မှတဆင့်ရရှိပါသည်။
ဦးခင်မောင်ဆွေ (သို့မဟုတ်) “ပါတီမှတ်ပုံတင်ရေးအယူအဆ” ပြတ်ပြတ်သားသားဆန့်ကျင်ကြ (ကျော်သာ) ၂၀၁၀ မတ် ၂၂ မတ်လ(၂၀) ရက် ညနေပိုင်း (အာအက်ဖ်အေ) သတင်းဌာနကနေတဆင့် သူ၏ “ပါတီမှတ်ပုံတင်ရေးအယူအဆ”ကို ဗြောင် ထုတ်ပြောသွားတာအားလုံးကြားသိပြီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ သူကအားလုံးကိုစိန်ခေါ်သွားသည်။ သို့အတွက်အားလုံးကလည်း လိုအပ်သလိုတုန့်ပြန်ဖို့တာဝန်ရှိလာပါတယ်။ ယခုတုန့်ပြန်ချက်ကိုအားလုံးထဲကတာဝန်သိသူတဦးမှ ကနဦးတုန့်ပြန်လိုက်တာလို့သာသဘောထားစေချင်ပါတယ်။ အခြားသော တာဝန်သိသူများကလည်း သက်ဆိုင်ရာရှုဒေါင့်အသီးသီးကနေ တုန့်ပြန်ကြပါလိမ့်မယ်။ နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ရပ်အဖြစ် မှတ်ပုံတင်မယ်လို့ ပိုင်းဖြတ်ထားပြီးပြီဆိုလျှင် ပထမဦးစွာလုပ်ရမယ့်အလုပ်မှာ “အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်၏ မူလရပ်တည်ချက်များ” ကို စွန့်လွှတ်ပစ်ပယ်ရန်ဖြစ်ပါတယ်။ သို့မှသာ (နအဖ) စစ်ကောင်စီ၏ ဥပဒေအမှတ် (၂/၂၀၁၀) နိုင်ငံရေးပါတီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေနှင့်အညီ နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ရပ် အဖြစ်မှတ်ပုံတင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ “ရော့နဂါး ရော့ပတ္တမြား”ဆိုသလိုပင်။ တနည်းအားဖြင့် ဗိုလ်သန်းရွှေက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ပြော သည့် စကားလိုပင် “ပိတ် ၄ပိတ်ကို စွန့်လွှတ်ကြောင်းအရင်ဆုံးကြေညာမှတွေ့ဆုံမည်” ဆိုသည့်စကားအတိုင်းပင်။ မှတ်ပုံတင်ရေးအယူအဆရှိတယ်/ပါတီမှတ်ပုံတင်မယ်လို့ ဦးခင်မောင်ဆွေက ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောနေလေတော့ “အဖွဲ့ချုပ်၏ မူလ ရပ်တည်ချက်များ”ကို စွန့်လွှတ်ပစ်ပယ်ထားလိုက်ပြီဆိုတာကိုလည်း သူ့ရဲ (အာအက်ဖ်အေ) နဲ့အင်တာဗျူးကိုနားထောင်လိုက်သူတိုင်း ရှင်း ရှင်းလင်းလင်းသိမြင်နားလည်သဘောပေါက်နိုင်ပါတယ်။ သူ့အယူအဆက “နိုင်ငံရေးရှိတာမရှိတာထက် ပါတီမှတ်ပုံတင်နိုင်ရေးသာအဓိက” ဆိုတာပဲဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် “ပါတီမရှိလည်းနိုင်ငံရေးရှိနေဖို့ကအရေးကြီးတယ်”လို့ဆိုတဲ့ ဦးဝင်းတင်၏ အယူအဆနဲ့ဖြောင့်ဖြောင့်ကြီးဆန့်ကျင်နေပါ တယ်။ “ပြဒါး တစ်လမ်း သံတစ်လမ်း”။ ပါတီတည်ရှိမှလူထုကိုစည်းရုံးနိုင်မယ်တဲ့။စကားလေးကနားထောင်ကောင်းသလိုပဲ။ ၁၉၈၈ကနေ့ယနေ့အထိအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တရားဝင်တည်ရှိနေခဲ့တာပဲမဟုတ်ပါလား။ လူထုကိုဘာတွေစည်းရုံးခဲ့သလဲ။ ဘယ်နေရာတွေမှာရှေ့ဆောင်ခဲ့သလဲ။ သိလွယ်မြင်လွယ်တာလေးတချို့ကို ကောက်ခါငင်ကာမေးစမ်းပါရစီ။ အဖွဲ့ချုပ် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနဲ့အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဦးဆောင်တဲ့ယာဉ်တန်းကို ဒီပဲယင်းမှာ အကြမ်းဖက်လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ဖို့ကြိုးစား တဲ့ ကိစ္စကိုထက်ထက်သန်သန်အရေးယူဆောင်ရွက်တာရှိခဲ့ပါသလား။ မန္တလေးမြို့၊ ထွန်တုံးရပ်က ကိုရွှေမောင်ဆိုသူ အဖွဲ့ချုပ်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးက ခမောက်ကြီးသွန်းလုပ်ပြီး ရန်ကုန်သယ်မယ်လုပ်တော့ အတွင်းရေးမှူးဦးလွင်ကဘယ်လိုထွက်ပြောခဲ့ပါသလဲ။ စက်တင်ဘာသံဃာ့အရေးအခင်းဖြစ်တော့လဲ ဒီချုပ်ကဘာတွေပြောခဲ့သလဲ။ အခုလတ်တလော ရန်ကုန်တိုင်းထဲကစက်မှုဇုံတွေမှာ အလုပ်သမားတွေ လုပ်ခတိုးမြှင့်ပေးရေး၊ အလုပ်ခွင်သာယာရေး တောင်းဆို ဆန္ဒပြမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေပေမယ့် အဖွဲ့ချုပ်က ဘယ်လိုအရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေပြုခဲ့ပါသလဲ။ လယ်သမားတွေလယ်သိမ်းခံရတဲ့ကိစ္စ၊ ကလေး စစ်သားအဓမ္မစုဆောင်းနေမှု စတဲ့ကိစ္စတွေမှာ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် တရားဝင်တည်ရှိနေပေမယ့် ဘယ်လိုအရေးယူဆောင်ရွက်မှုမျှ မလုပ်ခဲ့နိုင်ပါဘူး။ အဲသလိုလူထုရေးရာတွေတော့ မလုပ်ဖြစ်လို့ မလုပ်ဝံ့လို့မလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူးပဲထားပါတော့။ ၂၀၀၃ မေ၊ ဒီပဲယင်းအကြမ်းဖက်သတ်ဖြတ်လုပ်ကြံရေးလှုပ်ရှားမှုပြီးကတည်းကစလို့ ပိတ်ပင်ခံခဲ့ရတဲ့ တစ်နိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ ဒီချုပ် မြို့နယ်ရုံးတွေပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ရရေးနဲ့ အဖွဲ့ချုပ်စည်းရုံးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုရော အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကစွမ်းစွမ်းတမံဆောင်ရွက် နိုင်ခဲ့ပါသလား။ ကုန်လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် (၂၀) ကျော်က သွက်သွက်ကြီးခေါင်းရမ်းပြနေခဲ့ပါတယ်။ (နဝတ-နအဖ) စစ်အစိုးရကဘက်ပေါင်းစုံကနေ ညစ်ပတ်ဖိနှိပ်နေတာအမှန်ပါပဲ။ ဒီလိုညစ်ပတ်ဖိနှိပ်မှုတွေကို အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က ခေါင်းငုံ့ခံနေဖို့ တရားဝင်တည်ရှိနေတာမှမဟုတ်တာ။ အဲဒီလိုခေါင်းငုံ့နေရတဲ့ ဖိသမျှနှိပ်သမျှ ခါးစည်းခံနေရတဲ့ ပါတီတရားဝင်တည်ရှိမှုဆိုတာကို ဘာမက်မောနေစရာရှိပါသလဲ။ အခုထုတ်ပြန်ထားတဲ့ “နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေ”ဆိုတာက အဲသလို နှစ်ပေါင်းနှစ်ဆယ်ကျော်ခါးစည်းခံလာရတဲ့ ဘဝထက်ပိုဆိုးမယ့်တရားဝင်တည်ရှိမှုဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ သက်ဆိုင်ရာပါတီဝင်ကိုပင် သက်ဆိုင်ရာပါတီက သတ်မှတ်ရွေးချယ်နိုင်မှာမဟုတ်တဲ့အပြင် မှတ်ပုံတင်ရေးကော်မရှင်က မထင်ရင် မထင်သလိုအမ်ိန့်ပေးညွှန်ကြားလာတဲ့အခါညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းလိုက်နာဆောင်ရွက်ရမှာပါ။ မဆောင်ရွက်လျှင် အဲဒီပါတီရဲ့တည်ရှိမှု မှတ်ပုံတင်ထားမှုကို ကော်မရှင်ကဖျက်သိမ်းနိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။ မှားနေတာကို မှားနေကြောင်း/ မတရားတာကို မတရားတဲ့အကြောင်း/အတင်းအဓမ္မအနိုင်ကျင့်ဖိနှိပ်တာကို အတင်းအဓမ္မ အနိုင် ကျင့်ဖိနှိပ်နေကြောင်း ပြည်သူတွေသိရှိလာအောင်ဖေါ်ထုတ်ဖွင့်ချရမယ်။ ပြည်သူတွေပါဝင်လာအောင်လှုံ့ဆော်စည်းရုံးရမယ်။ ဒီလိုတိုက်ပွဲ ဆင်ဖို့တည်ရှိနေတာပါ။ ဒီလိုဖိနှိပ်အနိုင်ကျင့်မှုတွေကိုနိုင်ငံတကာကသိအောင် မီဒီယာတွေကနေတဆင့်ထုတ်ဖေါ်ပြောဆိုရမယ်။ မီဒီယာတွေကမေး လိုက် တိုင်း“ရှိပါတယ်/ အန်ကယ်တို့အခုချိန်မှာ ထုတ်ဖေါ်မပြောဆိုနိုင်သေးပါဘူး” ဆိုတာမျိုးတွေနဲ့ပဲအဆုံးသတ်သွားပါတယ်။ အခုတော့သိပ်ကို အချိန်နှောင်းနေပါပြီ။ ထုတ်ဖေါ်ပြောသင့်တာတွေကို ထုတ်ဖော်ပြောရမယ့်အချိန်မှာလူထုတစ်မျက်နှာထဲကိုကြည့်ပြီးပြောကိုပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။ မပြော ပဲနေတာ။ မပြောရဲတာဟာ လူထုအကျိုးကို ပစ်ပယ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ (နအဖ) စစ်အစိုးရ “နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားမရှိဘူး” ဆိုပြီး ဗြောင်လိမ်ပါတယ်။ “နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရှိနေကြောင်းလှုပ်ရှားမှု”ကို အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က ရှေ့ဦးဆောင်ပြီး ဘာကြောင့်တိုက်ပွဲမဆင် တာလဲ။ဆင်ဖြူမျက်နှာဆင်မည်းမကြည့်ဝံ့သလို(နအဖ)စစ်အစိုးရငြိုငြင်မှာကိုကြောက်နေပါသလား။ “ကြောက်ရခြင်းမှလွတ်ကင်းရေး” ဆိုတဲ့ စာအုပ်ကို ဒီချုပ်ခေါင်းဆောင်စုကပြန်လေ့လာကြရမယ်ထင်ပါတယ်။ အခုတော့ ကိုယ်ထွေးပြီးသားတံတွေးကို ကိုယ်ပြန်မျိုနေတဲ့ဘဝရောက်နေပါတယ်။ လူတိုင်းမြင်လူတိုင်းသိတဲ့ ထူးခြားချက်တစ်ခုကိုပြောရမယ်ဆိုရင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အကျဉ်းကျနေစဉ်ဆိုလျှင် ဒီချုပ် ခေါင်း ဆောင်စုဟာ (နဝတ-နအဖ) စစ်အစိုးရဖိအားပေးအကြပ်ကိုင်လာမှုတွေကို ငြင်းပယ်နိုင်စွမ်းမရှိပဲ (နဝတ-နအဖ) စစ်အစိုးရတီးပေးတဲ့ ဆိုင်း ချက်နဲ့အညီလိုက်ကတယ်ဆိုတဲ့အချက်ပါပဲ။ သာဓကပြပါမယ်။ ဂန္ဒီကြေညာချက်ထုတ်ပြန်တာသိပ်ကောင်းပါတယ်။ လွှတ်တော်ခေါ်ပေးဖို့တောင်းတာဖြစ်လို့တကယ်ကိုမှန်ကန်တဲ့တောင်းဆိုချက်နဲ့လုပ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမယ့်အဆုံးမှာ ဒီချုပ်ခေါင်း ဆောင်စုဟာကိုယ်တိုင်ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဂန္ဒီကြေညာချက်အတိုင်းမရပ်တည်ခဲ့ပါဘူး။ (နဝတ) စစ်အစိုးရရဲ့ (၁/၉၀) ကို အလျော့ပေးကာ လိုက်နာပါမယ်လို့ လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ ကျိုက္ကဆံ အမျိုးသားညီလာခံတက်တဲ့ဘဝဆိုက်ရောက်ရတာပါပဲ။ ဒီဖြစ်ရပ်တွေဟာ ဦးတင်ဦး၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ဦးဝင်းတင်တို့ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်း ခံနေရစဉ် ကာလတွေမှာဖြစ်ခဲ့တာတွေပါ။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကျိုက္ကဆံအမျိုးသားညီလာခံထဲထွက်လာတာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရာကနေ လွတ်မြောက်လာပြီးမှဖြစ်ပါတယ်။ ဂန္ဒီကြေညာချက်ထုတ်ပြန်စဉ်ကလည်းထုတ်ပြန်ထားတဲ့ မူအတိုင်း၊ သဘောထားအတိုင်းအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် မရပ်တည် ခဲ့ပါဘူး။ (နဝတ) စစ်အစိုးရ ဖိအားပေးတာကို မလွန်ဆန်ဝံ့ခဲ့ပါဘူး။ ဒီလိုမရပ်တည်ဝံ့တာဟာပျော့ပြောင်းမှုမဟုတ်ပါဘူး။ပျော့ညံမှုဖြစ်ပါတယ်။ အလျော့ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ အရှုံးပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ အရှုံးပေးမှနှလုံးအေးတယ်ဆိုရင် နိုင်ငံရေးမလုပ်ပဲ ရိပ်သာသွားပြီးတရားအားထုတ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်။ အခုလည်း ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ ရွှေဂုံတိုင်ကြေညာချက်အတိုင်းရဲရဲဝံ့ဝံ့ရပ်တည်ဖို့လိုပါတယ်။ ထိပ်တန်းတာဝန်ရှိ အီးစီတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဦးခင်မောင်ဆွေ က ရွှေဂုံတိုင်ကြေညာချက်နဲ့ ဒီချုပ်မူလရပ်တည်ချက်တွေကို ပစ်ပယ်စွန့် လွှတ်ပြီး “မှတ်ပုံတင်ရေး”ဆော်သြော်နေပါတယ်။ ဒီလိုပြောဆိုနေတာတွေကို အဆင့်ဆင့်သော ဒီချုပ်အဖွဲ့ဝင်တွေဟာ ဒီလိုယူဆမှုနဲ့တွေးခေါ်လုပ်ဆောင်မှုကို ပြတ်ပြတ် သားသား တိုက်ပွဲဆင်ရပါမယ်။ တိုက်ပွဲမဆင်သူဟာ အလိုတူအလိုပါသဘောထားရှိသူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပါတီမှတ်ပုံတင်ရေးဆော်သြော်နေတယ်ဆိုတာ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကို အရှက်တကွဲအကျိုးနည်းမှုမြောင်းပုပ်ထဲကို ဆွဲ ခေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကာယကံမြောက်တွန်းချနေတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မှတ်ပုံတင်ရေးအတွေးအခေါ်အယူအဆနဲ့ ထိုအယူအဆရှိသူ တွေကို ပြတ်ပြတ်သားသားတိုက်ပွဲဆင်ရပါမယ်။ မှတ်ပုံတင်ရေးဆိုတဲ့အယူအဆဆိုတာ အနှစ်သာအရပြောရရင် - (နအဖ) စစ်အစိုးရကို ဒူးထောက်အညံ့ခံလိုက်တာဖြစ်တယ်။ - ရွှေဂုံတိုင်ကြေညာချက်နဲ့ ဒီချုပ်မူလရပ်တည်ချက်တွေကို စွန့်လွှတ်ပစ်ပယ်လိုက်တာဖြစ်တယ်။ - ပြည်သူ့လူထုကို ကျောခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မှတ်ပုံတင်ရေးအယူအဆကိုတိုက်ပွဲဆင်တာဟာ - (နအဖ) စစ်အစိုးရကို ပြတ်ပြတ်သားသားဆန့်ကျင်တိုက်ပွဲဝင်တာဖြစ်တယ်။ - ရွှေဂုံတိုင်ကြေညာချက်နဲ့ ဒီချုပ်မူလရပ်တည်ချက်တွေကို ပြတ်ပြတ်သားသားထိန်းသိမ်းကာကွယ်တာဖြစ်တယ်။ - ပြည်သူလူထုကို ရဲရဲကြီးမျက်နှာမူတာဖြစ်တယ်။ နိုင်ငံရေးရှိတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီဆိုရင် ပြည်သူ့တစ်မျက်နှာပဲအဓိကကြည့်ရမယ်။ မျက်နှာများချင်လို့မရဘူး။ အစိုးရရဲ့ဖိနှိပ်မှုနဲ့ ကောက် ကျစ်ယုတ်မာမှုတွေကို ပြည်သူသို့တင်ပြပြီးတိုက်ပွဲဝင်ရဲရမယ်။ ဒီလိုမှမဆောင်ရွက်ရဲမဆောင်ရွက်ဝံ့တဲ့ပါတီဟာနိုင်ငံရေးရှိတဲ့ပါတီမဟုတ်ဘူး။နိုင်ငံရေးအသက်ဝိဉာဉ်ကင်းမဲ့နေတဲ့၊ သေနေတဲ့ပါတီ ပဲဖြစ်မယ်။ ဒါကြောင့် နိုင်ငံရေးအသက်ဝိဉာဉ်ကင်းမဲ့နေတဲ့ ပါတီတစ်ရပ်အဖြစ်ကျနော်တို့ရပ်တည်မလား။ နိုင်ငံရေးရှိတဲ့ပါတီတစ်ရပ်အဖြစ်ရပ်တည်မလား။ သို့တည်းမဟုတ် (နအဖ) စစ်အစိုးရတီးလိုက်တဲ့ဆိုင်းချက်နဲ့အညီ ကခုန်နေရတဲ့ အမည်ခံပါတီတစ်ရပ်အဖြစ်ရပ်တည်မလားဆိုတာ မတ်လ ၂၉ ရက်နေ့မှာ အဖြေပေးရပါလိမ့်မယ်။ Summary only...
၂၀၁၀ မတ်လ ၂၉ ရက်ကို ဗိုလ်သန်းရွှေကတော့ဒူးနန့်ပြီးစောင့်နေပါပြီ... NLD ပါတီ ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်မှာလဲ....ပြည်သူတွေဘာကိုမျှော်လင့်ရမှာလဲ... လမ်းမတွေထက် အရေးဆိုဖို့ ပြည်သူတွေစားဝတ်နေရေးတွေနဲ့ မောပန်းနေကြပါပြီ.... NLD ပါတီလဲကြမ်းတမ်းတဲ့ခရီးရှည်ကြီးဖြတ်သန်းလာခဲ့ရတာကိုပြည်သူများစာနာနေဆဲပါ... ပါတီအနေနဲ့ ရွှေဂုံတိုင် ဆုံးဖြတ်ချက် ကိုင်ဆွဲပြီး ရွေးကောက်ပွဲပျက်အောင်ဘယ်လိုတိုက်ပွဲဝင်မှာလဲ... မိမိတစ်ဦးတည်းသဘောမှာ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကို လုံးဝ မထောက်ခံ ကန့်ကွက်ပါသည်....သို့သော်...... နာဂစ်အခြေခံ ဥပဒေကို မည်သူတွေ မည်ကဲ့သို့ တားနိူင်ခဲ့သ လဲ...... ဘယ်သူသေသေငတေမာပြီးရော ဆိုတာစစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့စရိုက်ဆိုးပါ... ဒါကြောင့်ရွေးကောက်ပွဲမဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့သော်.. မိမိကိုယ်တိုင်....မိမိနဲ့ ထပ်တူ .....မလွတ်လပ်တဲ့ပြည်သူတွေ..ကျောင်းသားတွေ....တပ်မတော်သားတွေ... ဘယ်ပါတီကိုမဲပေးကြရမှာလဲ...ခုထဲကတောကြောင် အေးလွင်တို့...သုဝေ တို့ လက်ခမောင်းခတ်နေကြပြီ.... ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် NLD အနေနှင့် ပါတီ၏ တည်ဆဲမူဝါဒ ကို ကိုင်စွဲကာ လုံး ဝ မှတ်ပုံတင်ရန် မသင့်ပါ... ဒါကြောင့် NLD က လက်ရွေးစင်ခေါင်းဆောင်တွေ ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ လူ ခွဲပြီး NLD ကနူတ်ထွက်ကာ ပါတီသစ်ထောင်သင့်ပါပြီ..ပြောင်းလဲခြင်းများနဲ့လိုက်ရွေ့ဖို့အချိန်တန်နေပါပြီ.... အပြောလွယ်သလောက် အလုပ်ခက်သော်လည်း မလုပ်မဖြစ်လုပ်ရတော့မည့်အခြေအနေရောက်နေပါပြီ... ယင်းအတွက် NLD နှင့် ပါတီသစ်တို့ အကြား တူညီသော မူဝါဒမှာ ..စု..လွတ် ..တွေ. ...တောင်းဆိုချက်နှင့်အတူ ဘုံရန်သူ နအဖ စနစ် ကို အပြုတ်တိုက်ရန်နှင့်မတူညီသောဝါဒမှာ ရွေးကောက်ပွဲကိုချင်းကပ်ခြင်းသဘောထားသာပင်ဖြစ်ပေမည်...ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ယင်းပါတီများ ၏ ခေါင်းဆောင်မျှသာ မဟုတ် လူထုခေါင်းဆောင် လဲ ဖြစ် ရာ ပြည်သူ များ၏ နောက်ဆုံး ထွက်ပေါက်အတွက်ကန့်ကွက်မည်မထင်ပါ... (၁) ယင်းသည် NLD ပါတီပြိုကွဲခြင်းမဟုတ်ပါ...လိုက်လျောညီထွေပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်ပါသည်... (၂) NLD သည် နိုင်ငံရေးဂုဏ်သိက္ခာ ဟူသော စကားလုံးထက် ယခုအချိန်တွင် ပြည်သူတို့၏ အကျိုးစီပွား ဂုဏ်သိက္ခာ ကို ထောက်ထားကာ ဆုံးဖြတ်ခြင်းလဲဖြစ်ပေမည်...ထို့အတွက် ဂုဏ်သိက္ခာ ကျရန် မရှိ .. တက်ရန်သာရှိပေမည်... (၃) ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသည် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်...နိူင်ငံရေးခေါင်းဆောင်...တပ်မတော်ဖခင်...သူ. အချိန်ကာလနှင့်သူလိုက်လျောညီထွေ ပြောင်းလဲကာလွတ်လပ်ရေးကိုရယူနိူင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်...နေရာတခုတွင်တွယ်ကပ်မနေခဲ့ပါ...ပါတီ၏ လက်ရုံးအင်အား တချို. စနစ်တကျ ခွဲထုတ်ခြင်းမှာ..လုံးဝ ဖျက်သိမ်းခံရခြင်းထက်သာလွန်ပေလိမ့်မည်... (၄) ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှ ဘာဘဲဆုံးဖြတ်ဆုံးဖြတ် တသံတည်းထွက်ရမည်ဟုပြောထားခြင်းမှာလည်း ....ယခုကဲ့သို့ညီညွတ်သော အစုအဖွဲ့ဖြင့် စနစ်တကျ ခွဲထွက်ပါက ကန့်ကွက်မည်မထင်ပါ.... (၅) နိုင်ငံတကာသိ တဲ့ မြန်မာ့ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ NLD ပါတီ လွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတသော ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်နိူင်ရေး လမ်းစများ ဖော်ဆောင်နိူင်ရန် အချိန်ပိုမို ရပြီး နောင် အချိန်နီးမှ ပြည်တွင်းပြည်ပ ဖိအားများကြောင့် ကောင်းမွန်သော အပြောင်းအလဲဖြစ်ပါက ကြိုတင်ပြင်ဆင်ပြီးဖြစ်နိူင်ပါသည်... (၆) NLD ပါတီကို မတရားဥပဒေနှင့်ဖျက်သိမ်းစေကာမူ ဘဘဦးဝင်းတင်ပြောသကဲ့သို့ နိူင်ငံရေး ရှိသရွေ့ NLD ပါတီမပျက်ပါ.. (၇)ညီညွတ်စွာ ခွဲထွက်သောသူများကိုအာဏာရူး န အ ဖ လက်ကိုင်ဒုတ်ဟု မစွပ်စွဲသင့်ပါ....အားလုံးမှာ အစဉ်အလာရှိ မျိုးချစ်စိတ်ဓါတ်ရှိသူများပင်ဖြစ်ပါသည်...ပြည်တွင်းပြည်ပမှ အားလုံးဝိုင်းရံပေးဖို့လိုအပ်ပါသည်.... (၈)ညီညွတ်စွာခွဲထွက်ခြင်းဖြင့် နိူင်ငံရေး တိုက်ကွက် သစ်များဖြင့် နှစ်ဘက်ညှပ် ကာ ရန်သူကိုအောင်ပွဲဆင်နိူင်ပါသည်... (၉) သူတို့မတရားဥပဒေနှင့်သူတို့အား ပြန်တိုက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်....ရိုင်းရိုင်းပြောရရင်..ယုတ်မာသော စစ်ခွေးများကို ...သူတို့အမြှီးနှင့်သူတို့ ပြန်ချီခြင်း ဖြစ်ပါသည်... (၁၀) NLD ဗဟို တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် အသီးသီးမှ ရှိရင်းစွဲ အင်အားစုများနှင့် ပြည်သူများပူးပေါင်းသောအင်အားက ....မတရား ရွေးကောက်ပွဲကြီးကို မဖြစ်မြောက်အောင်ကြိုးစားရင်း နောက်ဆုံး ဖြစ်ခဲ့သော် အသင့်ဖွဲ.စည်းထားသော ပါတီသစ်အင်အားဖြင့် တွန်းလှန်ကျော်လွှားနိူင်ပါလိမ့်မည်... (၁၁) မတရား ရွေးကောက်ပွဲကြီးဖြစ်ခဲ့သော် စုစည်းထားသော ထိုပါတီသစ်မှ ၇၅ % မမှန်းနိူင်သော်လည်း ၅၀ % ကျော်သို့ ၆၀ % ကျော် ပြည်သူ့အားနှင့် အောင်နိူင်မည်မှာ အသေအချာပါ... (၁၂) လက်ရှိ အချိန်တွင်ရွေးကောက်ပွဲကြီးဖြစ်ခဲ့သော်ဟူသော အချိန်ထိ သာ စဉ်းစား ဆုံးဖြတ်ရန်ဖြစ်ပါသည်... ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မနက်ဖြန်လွတ်မြောက်မလား ၂၀၁၀ နိုဝင်ဘာ လွတ်မြောက်နိူင်မလား ...ဗိုလ်သန်းရွှေ ညစ်ပတ်မြဲညစ်ပတ်ခဲ့သော်ထိုထက်ပိုနိုင် အုံးမလား.....ပြည်သူလူထုကြီး သည်းခံနိူင်မူ အတိုင်းအတာမှသည် ...လူထုအုံကြွ မူ အတိုင်းအတာ...မမျှော်မှန်းနိူင်သော ပြောင်းလဲခြင်းများစွာ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါသေးသည်.....မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ... ဒိုင်နိုဆောကြီးကဲ့သို့အားကောင်းသော NLD ပါတီ ကို နောင်တစ်ခတ်တွင် နိုင်ငံရေးပြတိုက်တွင်း မကြည့်လိုပါ.....လွှတ်တော်စင်မြင့်ပေါ်တွင် သာကြည့်မြင်လိုလှပါသည်..... ကျွှန်တော်ဟာ ၈၈၈၈ မှာ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ကျောင်းသားတစ်ဦးပါ ...ဘယ်ပါတီဝင်မှ မဟုတ်ပါ...ကျွှန်တော့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သဘောထားကို NLD က ခေါင်းဆောင်များနှင့်ပြည်သူများ သိစေချင်လို့ဝေ မျှတာပါ။ လေးစားစွာဖြင့် အောင်မျိုးနိူင်
http://ifile.it/o1dn7sqNld Statement Summary only...